ANTONTANISA COVID-19 NIVOAKA FARAN’NY HERINANDRO: 45 ireo tranga vaovao manerana ny Nosy, 33 tamin’ireo tao Vakinankaratra – Free News
mercredi, 8 décembre 2021 - 12:37
Namoaka ny antontanisa ny Minisiteran'ny Fahasalamam-bahoaka.
Accueil/Songadim-baovao/ANTONTANISA COVID-19 NIVOAKA FARAN’NY HERINANDRO: 45 ireo tranga vaovao manerana ny Nosy, 33 tamin’ireo tao Vakinankaratra
ANTONTANISA COVID-19 NIVOAKA FARAN’NY HERINANDRO: 45 ireo tranga vaovao manerana ny Nosy, 33 tamin’ireo tao Vakinankaratra
Na dia najanona aza ny Hamehana ara-pahasalamana teto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara, volana vitsy lasa izay, dia nisy hatrany ny tranga iray na roa voamarina isan’andro teto amintsika, hoy ny Minisitry ny Fahasalamana, ny sabotsy teo. Amin’izao fotoana, misy indray ireo Faritra vitsivitsy efa manomboka miakatra ny tarehimarika amin’ireo olona mitondra ny tsimokaretina Coronavirus. Efa misy ihany koa ny fepetra raisina mifandraika amin’izany.
Nahatratra 45 ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimokaretina Coronavirus teto Madagasikara, raha ny vokatry ny fitiliana miisa 701 natao ny zoma 19 Novambra 2021 teo, hatramin’ny 12ora atoandro. Ny 33 tamin’ireo dia tao amin’ny Faritra Vakinankaratra avokoa. Enina kosa tao Matsiatra Ambony, 4 tao Menabe, ary iray avy teto Analamanga sy Anosy. Tsy nisy kosa ny aina nafoy, fa miisa efatra ireo anaty tranga misy fahasarotana, araka ny tatitra hatrany. Hatreto izany, tafakatra 44 072 ny fitambaran’ireo tranga voamarina teto amintsika, hatramin’ny nisian’ny Covid-19 teto Madagasikara. Miisa 42 802 kosa ireo nahazo fahasitranana soa aman-tsara, izay manome ny salanisa 97,12%. Miisa 967 ny fitambaran’ireo lavo, ary tafakatra 277 849 kosa ireo fitiliana rehetra vita.
Mila tohizina ny fihetsika sakana
Nohadinoin’ny olona daholo ny nanao ireo fihetsika sakana rehetra taorian’ny nanajanonana ny Hamehana ara-pahasalamana teto Madagasikara. Tafiditra ao anatin’izany fanaovana arotava, ny fanajana ny elanelana iray metatra, ny fanasana tanana sy ny sisa. Izay ihany anefa no fomba tokana hahafahana manakana ny fiparitahan’ny Covid-19, hoy ny Minisitry ny Fahasalamam- bahoaka, ny Profesora Zely Arivelo Randriamanantany, ny sabotsy teo.
Nampahafantarin’ity tomponandraikitra ity fa nisy olona voamarina ho mitondra ny tsimokaretina Coronavirus teto Antananarivo, roa herinandro lasa izay. Nojerena ny olona izay namindra tamin’io olona io. Fantatra taorian’ny fanadihadiana fa olona avy any Morondava, niala sasatra teto Antananarivo, ity nahitana tsimokaretina ity. Nisy ny fifampiresahana tamin’ny talem-paritra tany Morondava sy ny Minisitera foibe nahafahana nanao ny “tracing contact” tamin’izay rehetra nifanerasera tamin’ilay olona fony izy tany Morondava. Ampolony ireo olona voamarina fa mitondra ny Covid-19 tao anatin’izany. Tsy niova ny paikady nanakanana ny fiparitahan’ny aretina, ary natoka-monina izay hita fa mitondra ny Coronavirus.
Nisy, noho izany, ny fepetra manokana noraisin’ny Fitondram-panjakana ho an’i Morondava, toy ny fanakatonana ireo sekoly nahitana trangana Covid-19. Teo koa ny fandefasana fonosana CVO miisa 10 000, hanamafisana ny fiarovan-tenan’ny mponina. Teo indrindra no nanentanan’ny Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka ny olom-pirenena tsirairay mba samy hanamafy ny fiarovan-tenany, na izany amin’ny alalan’ny fihinanana CVO, na amin’ny fanaovam-baksiny, izay samy tsy misy an-tery avokoa. Rehefa tsy misy maharesy lahatra ny olona anefa ireo dia tokony hanamafy kosa ny fanajana ireo fepetra sakana ny olona, mba hahafahana manapaka ny rohim-pifindran’ny tsimokaretina.
VARY TSINJO: Noferan’ny Fanjakana ho 1 500Ar ny kilao
HANDBALL TOMPON-DAKAN’I MADAGASIKARA Im-balo nisesy nibata ny amboara ny ekipan’ny THBC
16 TAONA ATY AORIANA Nahazo Politikam-pirenen’ny kolontsaina vaovao isika
FIFANAKALOZANA ATY AFRIKA: Nohatsaraina ny lalàna mifehy ny fitaterana
FANDANIANA NY PL 001/2020 : Nolavin’ny HCC ny fitoriana nataon’ny senatera 19